BASELWORLD 2018 - Fialam-boly miaraka amin'ny Trans-Service Basel -
Isan-taona amin'ny lohataona, Basel dia tranon'ny herinandro ho an'ny orinasa 1,800 izay manolotra ny famantaranandro sy ny firavaka amin'ny Baselword. Ireo mpikarakara an'io fampirantiana goavana io dia tsy nitaraina momba ny maha-zava-dehibe ny mpitsidika. Ny mpivarotra 100,000 sy ny solontenan'ny mpivarotra no manantena ny hanatrika ny World Fair for Watches and Jewelery. Amin'ny Martsa 22, 2018 ny vavahadin-tsoavaly dia hisokatra ho an'ny mpitsidika.
Miaraka amin'ny mpamily anao manokana mankany BASELWORD - Transfer Service Basel
Ny EuroAirport Basel dia minitra vitsy monja miala ny toerana fananganana. Saingy raha ny marina - tahaka ireo mpanao dia lavitra hafa - dia te-hitsidika ny fampisehoana ny orinasa mandritra ny andro maromaro ianao. Imbetsaka ny mpandeha no manao ny ankamaroan'ny andro henjana indrindra amin'ny taona ara-barotra amin'ny indostria. Izany no antony hanoloranay tolotra manokana ho an'ny vanim-potoana Baselworld.
EuroAirport amin'ny fanendrena anao. Mandeha amim-pitiavana amin'ny Litoanianina amin'ny endriny alemana ary aza manahy momba ny fifamoivoizana mivezivezy na eny amin'ny toeram-piantsonana. Ankoatra ny fahamoram-potoana sy ny fahatsoram-pon'ny mpandeha dia malaza amin'ny mpandraharaha isika, satria mihaino tsara ny fahamalinana rehetra isika rehefa mitondra fiara.
Ny serivisy fanodinana Basel mora an-tserasera
Fantatsika - ny fotoana dia vola. Izany no antony nananganana anay online booking fitaovana ho anao. Amin'ny ora iray mitarika fotoana, dia vonona ho anao ianao ho toy ny limousine sy fiara manokana eo anoloan'ny trano fandraisam-bahiny na any amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny faran'ny fahatongavana sy ny fialan-tsasatra.
Ny ekipan'ny serivisy famindrana an'i Basel dia maniry ny hijanonanao eo amin'ny Baselworld sy ny orinasa tsara
Notsongaina tamin'ny: Airport shuttle Basel Baselworld Fivoriam-be
taxi.flughafen March 16, 2017 Novambra 18, 2017 Uncategorized No comments
← BASELWORLD 2018 - Mahafinaritra ny mandeha fiara miaraka amin'ny Trans-Service Basel
Fitsangatsanganana an-tanàna sy fitsangantsanganana amin'ny Trans-Service Basel →